Tag-it HF-I Card, Tag ကို-က HF-ငါ Chip ကဒ်, Ti2048 Chip ကဒ်, Ti2K Chip ကဒ်, Ti Tag Chip Card, Ti Tag White Card, Ti2048 White Card, Ti2K White Card
HF Chip ကဒ်, အင်းလေးကဒ် / လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Card ကို Tag-it HF-I Card, Tag ကို-က HF-ငါ Chip ကဒ်, Ti Tag Chip Card, Ti Tag White Card, Ti2048 Chip ကဒ်, Ti2048 White Card, Ti2K Chip ကဒ်, Ti2K White Card
Tag-it HF-I chip card, with anti-collision function, stable data storage up to 60 နှစ်ပေါင်း.
RF Chip: Tag ကို-က HF-ငါ
chip ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း: texas Instruments, ယူအက်စ်အေ
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 2048 နည်းနည်း, 64 × 32 အစိတ်အပိုင်းများသို့ခွဲခြား, တကမ္ဘာလုံးထူးခြားတဲ့ 64bit နံပါတ်စဉ်
operating အကြိမ်ရေ: 13.56MHz 200kHz ±
ပရိုတိုကောနျ Standard: IEC / က ISO 15693
R / W ကိုအကွာအဝေး: 1~ 120cm (ကဒ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အင်တင်နာအရွယ်အစားနှင့်ဆက်စပ်သော)
Read နှင့်အချိန်ကိုရေး: 1-2ms အထိကိုအတည်ပြု 50 တစ်စက္ကန့် tags များ
ပယ်ဖျက်နေတဲ့ဘဝ: ≥ 100,000 ကြိမ်
ဒေတာကိုသိုလှောင်မှု: ≥ 10 နှစ်ပေါင်း
ကဒ်အရွယ်အစား: က ISO စံကဒ် 85,6 × 54 × 0.84mm (ထိုကဲ့သို့သောအထူကဒ်အဖြစ်အထူးကဒ်နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်, key ကိုကွင်းဆက်, စသည်တို့ကို)
ပစ္စည်း: PVC / ကို ABS / PET / PETG / အင်ျကြီကိုစက္ကူ / Silicon, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
The Ti2048 contactless IC thin card consists of an IC chip andasensor antenna, is laminated to an international standard size card at high temperature. The Ti2048 RF thin card uses Texas Instruments original Tag-it HF-I chip, which complies with the IEC/ISO 15693 air interface protocol. Data can be stably stored for approximately 60 years at 125°F (55ကို C °).
အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, Valuable Asset Management, Book Management Tags, File Management, (Supermarket) Logistics Management, Ticket Cards, Luggage, Tray, အဝတ်အစား Tag ကို, Clothing Management, Windshield Label, Vehicle Management, Corporate One Card Solutions, School Management, Bus Stored value cards, highway tolls, parking lots, apartment building management and other fields. The white card can be used to print photos, ပုံစံများ, codes, logos, စသည်တို့ကို. Personalized prints withasmall printer.
I am interested in your product Tag-it HF-I Chip Card, Ti2048 Chip ကဒ်, Ti2K Chip ကဒ်
prev: ဦးကုတ် HSL ထူးအိမ်သင် Card ကို, ဦးကုတ် HSL(SL3 ICS30) ကားရပ်နားကွင်းကို Long Range 915MHz Card ကို, ISO ကို 18000-6B အဖြူရောင်ကဒ်
နောက်တစ်ခု: Tag ကို-က HF-ငါစံ Chip ကဒ်, Ti256 Chip ကဒ်